रोहितले तर्साउन खोजेका हुन् कि बार्गेनिङ गरेका ? « Intro Nepal
रोहितले तर्साउन खोजेका हुन् कि बार्गेनिङ गरेका ?
Published On : १८ श्रावण २०७६, शनिबार १३:१३
केही दिन अगाडी सामाजिक संजालमा फिल्म ‘छ माया छपक्कै’का निर्माता रोहित अधिकारीले ‘भदौ २७ इट्स अफिसियल’ भन्दै एक स्टाटस पोस्ट गरे । सो स्टाटसलाई आधार मानेर फिल्म छ माया छपक्कै भदौ २७ देखी प्रदर्शनमा आउने समाचार शिर्षकहरु बने । तर, शनिवार उनले, ‘भाद्र २७, अशोज ३, अशोज १०, अशोज १७ मध्ये एक’ भन्दै अर्को स्टाटस पोस्ट गरेका छन् ।
भारतीय फिल्म प्रदर्शन मितीले नेपाली फिल्म प्रदर्शनलाई उथलपुथल बनाएको अवस्थामा छ माया छपक्कै निर्माताको स्टाटसले अर्को तरंग पैदा गर्ने निश्चित छ । असोज ३, १० वा १७ मध्य १ दिन फिल्म प्रदर्शनमा ल्याउने हल्लाका बिच उनले भदौ २७ अफिसियल भन्दै स्टाटस पोस्ट गरेपछी फिल्म सोही दिन प्रदर्शनमा आउने अनुमान गरेका अधिकांशलाई निर्माता अधिकारीको पछिल्लो पोस्टले दोधार बनाइदिएको छ ।
हुन त आफ्नो लक्षित प्रदर्शन मिती असोज ३ मा ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ प्रदर्शनमा आउने भएपछि त्यसलाई चेपुवामा पार्न भदौ २७मा छ माया छपक्कै प्रदर्शनमा ल्याउन लागेको धेरैले अनुमान लगाएका थिए । तर, सबैको अनुमानलाई गलत सावित गर्दै निर्माता अधिकारीले दोधारको अवस्था सिर्जना गरिदिएका छन् ।
रोहितले स्टाटस पोस्ट गर्नुको कारण अर्को हुन पनि सक्छ । अघिल्लो बर्ष एकै दिन प्रदर्शनमा आउने भनिएका अशोक शर्माको फिल्म ‘जय भोले’ र दीपक-दीपाको ‘छक्का पन्जा ३’ बिच सहमती भएर जय भोलेले आफ्नो प्रदर्शन मिती केही दिन पछाडी सारेको थियो । अशोकले सोही समयमा रातो टिका निधारमा अर्को दशैँमा प्रदर्शनमा आउने घोषणा गरेका थिए । अघिल्लो बर्ष दीपक दीपाले आफुले रोजेको प्रदर्शन मितीमा फिल्म प्रदर्शन गरेका थिए ।
यसपटक अशोक शर्माले रोजेको प्रदर्शन मिती पाउँछन् र ‘रातो टिका निधारमा’ र ‘छ माया छपक्कै’ सहमतीमा प्रदर्शनमा आउँछन् भन्ने अनुमान गरिएको छ । तर, यही अनुमानका बिच छ माया छपक्कैका निर्माताको पोस्टले कतै घुमाउरो पारामा अशोक शर्मालाई फिल्म प्रदर्शन मिती तय गर्ने सवालमा तर्साएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
अर्को तर्फ असोज १५ गते ऋतिक रोशन र टाइगर श्राफ स्टारर फिल्म ‘वार’ प्रदर्शनमा आउने भए पश्चात कतै छ माया छपक्कैले रिलिज मितीमा बार्गेनिङ गर्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ ।